वीरगञ्जका अस्पतालहरुको लापरवाहीका कारण गयो विष्णुको ज्यान, स्थानीय प्रशासन मौन - Yatra Daily
Home Headline वीरगञ्जका अस्पतालहरुको लापरवाहीका कारण गयो विष्णुको ज्यान, स्थानीय प्रशासन मौन
वीरगञ्जका अस्पतालहरुको लापरवाहीका कारण गयो विष्णुको ज्यान, स्थानीय प्रशासन मौन
आशुकुमार सर्राफ/वीरगञ्ज २४ श्रावन । बुधबार दिउँसो वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २ छपकैयाँकी २२ वर्षीय विष्णु लामालाई रुघाखोकीसहित सामान्य ज्वरो आयो । केहि दिनदेखि अत्याधिक गर्मि बढ्दा मौसम परिवर्तन भएको कारणले उनलाई ज्वारो आएको भनेर विष्णुले सोचिन । घर छेउमै रहेको फार्मेसीबाट ज्वरो र रुघाखोकीको औषधी किनेर खान सुरु गरिन ।
बिहिबार साँझसम्म विष्णुको अवस्था सामान्य थियो । आफ्नो ४ वर्षीय छोरीसँग एक्लै बस्ने विष्णुलाई एकाएक शुक्रबार बिहान श्वासप्रश्वासमा समस्या आयो अनि घर भन्दा ३ सय मिटर टाढा बस्ने आफ्नो भिनाजु रुपेश सिंहलाई सहयोग गर्न बोलाइन । भिनाजुसँगै विष्णु निजिकैको एउटा अस्पताल पुगिन तर त्यहाँ चिकित्सकले उनलाई कोरोना चेक गराएर आउन भनेपछि उनि फर्किन ।
‘हामी नजिकैको अस्पताल पुग्दा विष्णुलाई उच्च ज्वरो आएर श्वासप्रश्वासमा एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो,’ विष्णुका भीनाजु रुपेशले सम्झे, ‘त्यहाँ डाक्टर सा’बहरुले कोरोना जाँच गराएर आए मात्र भर्ना गर्छु भनेपछि हामीले चिनजानका एक जना हस्पिटलमा काम गर्ने भाइको सल्लहा अनुसार थप औषधी किन्यौं र भोली कोरोना चेक गराउने भनेर फर्कियौं ।’
दिउँसोसम्म ठिक रहेकी विष्णुलाई राती ९ बजे श्वासप्रश्वासमा फेरी गाह्रो भयो, उनले भिनाजु रुपेशलाई पुन: सम्झिन अनि रुपेश घर छेउमै बस्ने स्थानीय पत्रकार अजित भुजेलसँग इ-रिक्सामा लिएर उनलाई एडभान्स मेडिकेयर हस्पिटल पुगे ।
एडभान्स पुग्दा विष्णुको अक्सिजन लेभल घटेको चिकित्सकले बताए र तत्काल आइसीयुमा भर्ना गरेर अक्सिजन चढाउँनु पर्ने सल्लहा दिए । तर, केहि दिन अगाडी एडभान्सका चिकित्सक र कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण भेटपछि अस्पतालको इमर्जेन्सी बाहेकका अन्य सेवा बन्द हुँदा उनलाई चिकित्सकले नेसनल मेडिकल कलेज जान सुझाव दिए ।
यता इ-रिक्सा चालकले आफु नेसनल मेडिकल कलेज नजाने भन्यो अनि रुपेश र भुजेलले विष्णुलाई लिएर नारायणी वयोधा अस्पताल पुगे तर त्यहाँपनि चिकित्सकसहित १४ वटा कर्मचारीमा कोरोना भेटिएका कारण अस्पताल बन्द थियो । यो गर्दा गर्दै रातिको ११ बबजी सकेको थियो तर विष्णुको अवस्था ठीकै थियो, गाह्रो भएपनि उनि कुरा गरिरहेकी थिइन ।
त्याहाँबाट उनीहरु विष्णुलाई लिएर तराई हस्पिटल तर्फ लागे । यसै बीच पत्रकार भुजेलले सहयोगको गुहार लगाउँदै फेसबुकमा एउटा पोष्ट लेख्न भ्याए । राति अबेरसम्म जागेका जनता समाजवादी पार्टीका स्थानीय नेता तबरेज अहमदले त्यो पोष्ट पढे र भुजेललाई फोन गरे । भुजेलले विष्णुको अवस्थाका बारेमा बताएपछि मोटरसाइकल निकालेर अहमद पनि तराई हस्पिटलका जान निस्के ।
विष्णु तराई हस्पिटल पुग्दा त्यहाँ चिकित्सकहरुले आइसीयुमा एउटापनि बेड खालि नभएको बताउँदै उनलाई अर्को हस्पिटल जानुस भनेर फिर्ता पठाईदिए । तराई हस्पिटल पुग्दा विष्णुले आफ्नो होस् गुमाई सकेकी थिइन ।
‘हामी तराई हस्पिटल पुग्दा विष्णुको आँखा बन्द भएपनि श्वास चलिरहेको थियो । त्यहाँ चिकित्सकहरुले आइसीयुमा बेड खालि छैन अर्को अस्पताल लाग्नुस् भनेर हामीलाई भने,’ रुपेशले यात्रा डेलीलाई भने, ‘अनि हामीले आइसीयु खालि नभएपनि इजर्जेंसीमै अक्सिजन चढाई दिन अनुरोध गर्यौं, विष्णुलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो । तर उहाँहरु मान्नु भएन, हामीलाई फिर्ता पठाई दिनुभयो ।
त्यसपछि भुजेलले रिक्सा चालकसँग अनुरोध गरेर रिक्सालाई नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल तर्फ मोड्न लगाए । नेसनल मेडिकल कलेज पुग्दा त्यहाँ विष्णुलाई गेटबाट नै फर्काइयो । ‘कोरोना रिपोर्ट नभएका विरामीलाई भित्र पस्न नदिन हामीलाइ सरहरुको आदेश छ,’ भन्दै गेटबाट नै पालेले उनीहरुलाई फर्काए ।
यता भुजेलले अहमदलाई तराई हस्पिटल नगई घण्टाघर चोक पुग्न आग्रह गरे । नेसनलबाट फर्किंदा लिंक रोडमै पर्छ भवानी हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर । भुजेलले एक पटक भवानीमा भर्ना गर्ने प्रयास गरौँ भनेर रिक्सालाई रोके तर त्यहाँपनि कोरोना चेकजाँच नभएका विरामीलाई भर्ना गर्न नमिल्ने भन्दै पालेले गेटबाटै फर्काए ।
‘विष्णुलाई हामी कहाँ लिएर जाउँ-जाउँ हुँदै थियो, केहि समझ आइरहेको थिएन,’ रुँदै रुपेशले भने, ‘अनि भुजेल दाईले ल नारायणी लागौं, त्यहाँ उपचार गर्ला की भनेर भनेपछि हामी नारायणी अस्पताल गयौं तर त्यहाँपनि डाक्टर छैनन् भनेर विष्णुलाई भर्ना गरेरन । एक जना भाईले उहाँको अवस्था एकदमै गम्भीर छ, छिटो अक्सिजन नपाए उनको मृत्यु पनि हुनसक्छ मात्र भन्नुभयो ।’
त्यो बेलासम्म तबरेज अहमद घण्टाघर पुगिसकेका थिए । उनले भुजेललाई फोन गरे । भुजेलले आफुहरु नारायणीमा भएको बताउँदै यहाँ पनि भर्ना गर्न नमानेको कुरा अहमदलाई सुनाए । अहमदले यो कुरा सुनेपछि अस्पतालका मेसु मदन उपाध्यायलाई फोन गरे तर उनको फोन उठेन । मेसुक फोन नउठेपछि अहमदले नारायणी अस्पतालका अर्का चिकित्सक डा. नीरज सिंहलाई फोन गरे । सिंहको पनि फोन उठेन ।
‘मैले मेसु सा’बलाई फोन गर्न धेरै प्रयास गरे तर उहाँले उठाउनु भएन, फेरी मेरो मित्र पर्ने कोभिड अस्पतालका डाक्टर निरज सिंहलाई पनि फोन गरे उनले पनि फोन उठाएनन्,’ तबरेजले भने, ‘अनि मैले भुजेलजीलाई वीरगञ्ज हेल्थ केयर जाउँ भनेर बोलाए ।’
नारायणीबाट वीरगञ्ज हेल्थ केयर हस्पिटल लगभग ४ किलोमिटर टाढा छ । त्यहाँ पुग्दा-पुग्दै विष्णुको श्वास चल्न छोडिसकेको रुपेशले सम्झदै भने, ‘हामी वीरगञ्ज हेल्थ केयर जाँदा विष्णुको श्वास चलिरहेको थिएन, तरपनि चिकित्सकले केहि गर्लान कि भनेर हामीले उसलाई त्यहाँ लाग्यौं तर हेल्थ केयरमा कोभिड सङ्क्रमितहरुलाई मात्र राख्दो रहेछन । हामीलाई गण्डक कोभिड अस्पताल जान त्यहाँका एकजना स्टाफले सुझाव दिए ।
गण्डक लागेपछि अहमदले त्यहाँका इन्चार्ज डा. उदय नारायण सिंहलाई फोन गरे । डा. सिंहले त्यहाँ रहेको सेमी-आइसोलेसनमा विष्णुलाई भर्ना गर्न स्टाफलाई अराहे । तर, त्यो बेलासम्म विष्णुको मृत्यु भइसकेको थियो । गण्डक अस्पतालका चिकित्सकले विष्णुलाई २ बजे मृत घोषित गरे ।
वीरगञ्जमा अस्पतालको लापरवाहीका कारण विगत ३ दिनमा यो तेस्रो मृत्यु हो । कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको भयले यहाँका निजि अस्पतालहरुले विरामीलाई भर्ना नगर्दा समेत स्थानीय प्रशासनले कारवाहीको लागि कुनै कदम उठाउन सकेको छैन । केहि दिन अगाडी एउटा सूचना जारी गरेर विरामीलाई उपचार नगर्नेलाई कारवाही गर्छु भनेर भन्नु बाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले कुनै ठोस कदम उठाएको छैन ।
निजि अस्पतालहरुको लापरवाहीका कारण दिनहु मान्छेको ज्यान जानु दु:खद भएको नेता अहमदले बताए । उनले यस्तो संवेदनशील विरामीलाई समेत अस्पतालले भर्ना नगर्नुले हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरु प्रति एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको भने ।
विष्णुको मृत्यु नभई हत्या भएको अहमदको आरोप छ । ‘विष्णुको मृत्यु भएको होइन, उसको वीरगञ्जका निजि अस्पतालहरुले हत्या गरेका छन् । स्वास्थ्य उपचारका लागि खोलेका हस्पिटलहरुले विरामी नै भर्ना नगर्ने हो भने खोलेको के फाइदा?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
विष्णु श्रीमानसँग छुटेर आफ्नो ४ वर्षीय छोरीसँग एक्लै बस्दै आएकी थिइन । स्थानीय एउटा उद्योगमा काम गरेर आमाले छोरीलाई हुर्काइ रहेक भिनाजु सिंहले बताए । ‘छोरीको अब अभिवावक कोहि छैन, उ कहाँ जान्छ? रुपेशले प्रश्न गरे’ ।
विष्णुको शव अहिले गण्डक कोभिड अस्पतालमा राखिएको छ । कोरोना परिक्षणका लागि उनको स्वाब सङ्कलन गरेर नारायणी अस्पतालको प्रयोगशाला पठाईएको छ । परिक्षणको नतिजा आज साँझसम्म आउने चिकित्सकले बताएका छन् ।
Previous articleपर्सा पछि बारामा पनि कोरोना सङ्क्रमण बढदै, स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव – प्रजिअ पण्डित
Next articleबहुदरमाईका मेयर साहसहित पर्सामा थप ५४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि